रोचक/अनौठा खबर Archives - www.kchhakhabar.com
२९ साउन, काठमाडौं । अल्सर रोगको कारण लिंग कुहिएर झरेपछि भारतको लखनउमा एक ८२ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको छ । वृद्धले आफ्नो यौनांगमा अल्सर भएपनि समाजको लाजको कारण त्यसलाई बेवास्ता गर्दै १२ महिनासम्म कसैलाई नभनी पीडा सहेर बसेका थिए । ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा गत बिहीबार प्रकाशित विस्तृत केस स्टडी अनुसार साह्रै भएपछि मात्र उनी उपचारका लागि अस्पतालमा गएका थिए । परिक्षणबाट उनको यौनांगमा अल्सर भएको र लिंग...
काठमाडौं, २२ साउन । एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । केबिन एबोसले आफुले अर्गानिक आलूको फोटो एक अज्ञात युरोपेली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको पुष्टि पनि गरेका छन् । यो फोटो २०१० मा खिचिएको थियो । यसको पोर्टफोलियो सटिबन सपिलबर्ग, माइलक पेलिन, फेसबुकको शेरिल स्यान्डवर्ग तथा मलाला यसूफजईमा पनि समावेश छ । यो आलूको प्रिन्टको तीन भर्सन रहेको छ । ...
१० दिनअघि मरेकी महिलाको अन्त्येष्टिका लागि लैजाने क्रममा मानिसहरु तब अचम्ममा परे जब महिलाको लास राखिएको कफन खोलियो । दक्षिण अफ्रिकाको एक गाउँमा यस्तो घटना भएको छ । अन्त्येष्टिका लागि महिलाको शव लगिरहेका शवगृहका कर्मचारीहरुले मृतक महिलाको शव राखिएको कफन खोल्दा झसँग भए । कफनभित्र मृतक महिलाको शव त थियो नै उनले जन्माएको जीवित नवजात शिशु पनि थियो । ३३ वर्षकी नामभेलिसो नामासोन्तो म्योदी नामकी मह...
यहाँ दिइएको तस्वीर इण्डोनेसियाको एक विशेष पर्वको हो । जसको नाम हो यादन्या कासदा । यो त्यहाँको विशेष पर्व हो ।यो पर्वमा गरिने क्रियाकलाप झनै विशेष छन् । विशेष मात्र होइन, खतरनाक पनि छन् । यस पर्वका अवसरमा मानिसहरु फाटिरहेको ज्वालामूखीबाट बलेको आगोमा हाम फाल्छन्, दौडिन्छन् । यस पर्वका अवसरमा यहाँको पहाडलाई भगवान मानिन्छ । किनकी पहाडले मानिसहरुलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदछ । इण्डोनेसिायको पूर्व...
बर्बरी ब्राण्डका कपडाको बारेमा त सुन्नुभएकै होला । यो ब्राण्डका कपडा लगाउनुभएको पनि होला । ट्रेन्च कोट, चेकवाला स्कर्फ तथा ब्याग लगायतका लागि यो ब्राण्ड अत्यन्तै चर्चित छ । यो ब्राण्डका डिजाइन दुनियामा सबैभन्दा धेरै नक्कल गरिने ब्राण्ड पनि हो । यस्ता विश्वचर्चित ब्राण्डहरु आफ्नो बजारको प्रतिष्ठाका लागि लाखौँ करोडौँ रुपैयाँसम्म खर्च गर्न तयार रहन्छन् । मार्केट भ्यालू बचाउनका लागि करोडौँ रुपै...
सोसल मिडियामा हालै एक खबरले तहल्का मच्चाइरहेको छ । भारतमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसियाकै सबैभन्दा सानो बच्चा जन्मिएको छ । हैदराबादस्थित रेन्बो हस्पिटलमा हालै ३७५ ग्रामको बच्चा जन्मिएको छ । आखिर त्यति सानो बच्चा कसरी सकुशल जन्मियो भनेर डाक्टरहरु नै हैरान छन् । छत्तिसगढको एक दम्पत्तिले ३ सय ७५ ग्रामकी छोरी जन्माएका हुन् । आमा निकिताले गर्भ रहेको २५ औँ हप्तामै छोरी जन्माएका कारण बच्चीको तौल य...
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्गस्थित डिपलुस्ट सहरलाई दुनियाकै खतरनाक सहर भनिन्छ । त्यहाँ महिलाहरुमाथि बलात्कार हुनु सामान्य कुरा हो । हालै बीबीसीसँगको कुराकानीमा उक्त सहरका दुई युवकहरुले आफुले अहिलेसम्म कैयन् महिलाको बलात्कार गरिसकेको डरलाग्दो खुलासा गरे । यसो भनिरहँदा उनीहरुको अनुहारमा कुनै अपराधबोध थिएन । आफ्नो नाम गोप्य राखेका ती युवकले आफ्नो बलात्कार कर्मको कहानी बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘जब मह...
मनोरन्जनका लागि बनाइने ‘प्रयाङ्क भिडियो’ अहिले संसारभर निकै चर्चित रहेको छ । जसमा सामाजिक संदेश दिने देखि बिसुद्ध रमाइलो र हसाउने हेतुले बनाईने थुप्रै भिडियोहरु हामीले युटुबमा देख्न सकिन्छ। हामि आज तपाइँलाई एउटा यस्तो ‘प्रयाङ्क भिडियो’ देखाउन जाँदै छौं, जसमा एक पुरुषले बीचसडकमा खुलेयाम महिलाको संबेदनशीलसंग स्तन समाउदै हिडेका छन्। उनले भिडियोमा १०० जना महिलाको स्तन समाएका छन्। हेर्नुस ...
भारत । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगका कारण वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असरबाट जोगाउनका लागि वैज्ञानिकहरुले दिनहुँ नयाँनयाँ प्रयोग र आविष्कार गरिरहेका छन् । सोही क्रममा वैज्ञानिकहरुले प्लास्टिकको प्रयोग हुने केही सामाग्रीहरु यस्तो पदार्थबाट बनाएका छन् जसलाई खान मिल्दछ । भारतको हैदरावादका नारायण पिसपति नामक वैज्ञानिकले अन्नको पिठोबाट चम्चा तयार गरेका छन् । उक्त चम्चा हामीले दिनहुँ...
केही यस्ता सवालहरु छन् जुन हामीले बच्चा देखी सुन्दै र भोग्दै आएका छौँ । तर तीनका जवाफ भने अहिले सम्म भेटिएको छैन् । ति मध्ये एउटा हो पहिले कुखुरा आयो वा अण्डा ? त्यस्तै आज हामी तपाईलाई यस्तै एउटा प्रश्नको बैज्ञानिक उत्तर दिनेछौं, जुन प्रश्न लामो समयदेखि बहसमा छ । अण्डा साकाहारी कि मांशहारी ? कयौं शाकाहारी मानिसहरु अण्डालाई मांशाहारी मानेर अण्डा सेवन गर्दैनन् । उनीहरु भन्छन कि अण्डा कुखुराले उत्...